१८ वर्षीय देवरसँगको यौन सम्बन्ध खुल्ने डरले सासुको हत्या - Naya Page१८ वर्षीय देवरसँगको यौन सम्बन्ध खुल्ने डरले सासुको हत्या - Naya Page
७ माघ २०७८, शुक्रबार |
१८ वर्षीय देवरसँगको यौन सम्बन्ध खुल्ने डरले सासुको हत्या
११ पुष २०७८, आईतवार
सल्यान । सल्यानमा एक महिलाले परपुरुषसँग मिलेर सासुको हत्या गरेकी छन् । छत्रेश्वरी गाउँपालिका-५ झिप्पेकी २४ वर्षीया सुशीला बुढा मगरले नातामा देवर पर्ने गाउँकै १८ वर्षीय कमल मगरसँग मिलेर ७० वर्षीया सासु जमानी बुढामगरको हत्या गरेकी प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
आफूहरुबीचको अनैतिक यौन सम्बन्ध लुकाउन उनीहरुले यस्तो अपराध गरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ । सुशीला जमातीकी काइँली बुहारी हुन् । जमातीको गएको असार ११ गते मृत्यु भएको थियो । दुई जना मिलेर जमानीको घाँटी थिचेर हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रवक्ता श्यामप्रकाश यादवले जानकारी दिए ।
‘घाँटी थिचेर हत्या गरेपछि भर्‍याङबाट लडेर मरेको भन्ने हल्ला फैलाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ,’ यादवले भने । प्रहरीका अनुसार सुशीलाले भारतमा रहेका परिवारका अन्य सदस्य र छरछिमेकलाई सासु भर्‍याङबाट लडेर मरेको जानकारी गराएकी थिइन् ।
शंकाको आधारमा अनुसन्धान गर्दा मृत्यु नभई हत्या गरेको खुलेको हो । प्रमाण मेटाउन मृतककी माइली बुहारी २८ वर्षीया चमेली र कमलका बुवा बालारामले समेत सहयोग गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
हत्यामा संलग्न र प्रमाण मेटाउन सहयोग गर्ने चारै जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सुशीला, चमेली, बालाराम र कमल छन् । आज नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । सुशीला र कमलबीच केही समयदेखि अनैतिक यौन सम्बन्ध रहेको स्थानीयले बताएका छन् । उनीहरुबीचको सम्बन्ध जमातीले देखेपछि समाजमा बदनाम हुने डरले दुई जना मिलेर हत्या गरेका प्रहरीले जनाएको छ ।
अझै तीन दिनसम्म मौसम सुधार नहुने
स्थानीय निर्वाचन सार्ने विषयमा देउवा आफैं अलमलमा
बाहिर निस्कँदै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने खोप कार्ड बोक्न नबिर्सिनुस्
उपत्यकामा शुक्रबार रातिदेखि सवारी साधनमा जोर विजोर प्रणाली
यी १२ युवायुवती जसले अनलाइनमार्फत १० लाख डलर भन्दा बढीको जुवा खेलाए
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सबै परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित
रक्सी खाएर स्थानीयसँग झगडा गरेका मेजर सेवाबाट बर्खास्त
नारायणहिटीमा क्याफेटेरिया निर्माण प्रकरणको अन्तरकथा
प्रधानसेनापतिको निर्णय विरुद्ध उपरथी कार्कीको ‘विद्रोह’
११ वर्षपछि खुल्यो इजरायल रोजगारी, पहिलो चरणमा ९९ नेपाली प्रस्थान
प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने
उपत्यकामा आजदेखि थप यी नयाँ प्रतिबन्ध
कोरोना खोप लगाएको कार्ड हरायो ? यसो गर्नुहोस्
खोप अभियान सञ्चालनका लागि माघ १६ देखि २० गतेसम्म विद्यालय खुल्ने
गाउँ, नगर र जिसस महासंघको माग : स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल सुरु गरियोस्
कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि थप नयाँ थप प्रतिबन्ध : के-के गर्न पाइँदैन ?
हुम्लीलाई तीन महिनापछि बल्ल चार किलो चामल, त्यहि पनि नागरिकता पेस गर्नुपर्ने
चिनियाँ राजदूतावासले फेरि भन्यो- नेपालसँग कुनै सीमा विवाद छैन